Sheekada filimka Sui Dhaaga – Made In India: waa filim qiiro badan fariin waaqici ahna xambaarsan – Filimside.net
Sheekada filimka Sui Dhaaga – Made In India: waa filim qiiro badan fariin waaqici ahna xambaarsan
September 28, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: September 28, 2018
Sui Dhaaga – Made In India waa filim lagu sameeyay mid ka mid ah tuulooyinka Hindiya sidoo kalena xambaarsan fariin arimaha bulshada ku saabsan sidoo kalena dhiiri galinaayo in qof walbo hal abuur ganacsi la imaado si noloshiisa aysan dad gaar ah ugu tiirsanaanin.
Jilaayaasha filimkan: Varun Dhawan, Anushka Sharma, Yamini Das, Raghuvir Yadav
Waqtiga uu soconaayo: 2-saac iyo 2-daqiiqo ama 122-daqiiqo
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Filimkan: Inaba caadi ma ahan qaab jiliinka Varun Dhawan uu la yimid, fariinta qiirada badan kuna qotonto arimaha bulshada iyadana waa mid kale oo xiiso gaar ah leh.
Muxuu Ku Liitaa Filimkan: Filimkan malahan mada daalo dhameestiran oo daawade kasto ku qasbeyso sheekadan inuu ka sal gaaro sidaa darteed waxyar mada daalo ah heeso iyo shactiro waaqici ah in lagu kabo ayaa fiicneyd fariintan muhiimka ah.
Fariinta Filimkan Oo Kooban: Mauji (Varun Dhawan) wuxuu ku nool yahay tuulo u dhow magaalada Delhi waxaana la nool xaaskiisa Mamta (Anushka Sharma), aabihiis (Raghubir Yadav) iyo hooyadiis (Yamini Das).
Mauji (Varun) wuxuu ka shaqeeyaa dukaan lagu iibiyo qalabka harqaanka ama dawaarka loo adeegsado waxaana dukaankan iska leh Bansal (Sidharth Bhardwaj) iyo wiilkiisa Prashant (Ashish Verma) waxayna labadan dukaanka isla leh ka siman yihiin dhaqan ahaan inay si xun ula dhaqmaan Mauji (Varun) ayagoo ku cayaar cayaaraan mararka qaarna bah dilaan sharafkiisa.
Prashant (Ashish Verma) marka uu guursanaayo aabihiis Bansal (Sidharth Bhardwaj) wuxuu arooskan ku casuumayaa Mauji (Varun Dhawan) iyo qoyskiisa si xun ayaa xaflada arooska loogu bah dilaa Mauji (Varun) marka laga dalbado inuu eey iska dhigo waxaana ku qasbayaan inuu sidaan sameeyo qoyska arooska dhigteen isagana wuu sameenayaa waxaana aad arinkan fool xumada uga carooneyso Mauji (Varun) xaaskiisa Mamta (Anushka).
Sidaa darteed Mamta (Anushka) waxay seygeeda Mauji (Varun) ku dhiiri galineysaa inuu isaga shaqeesto oo u weliba harqaanle ama dawaarle noqdo madaama uu shaqadan wax ka yaqaano. Laakiin Mauji (Varun) awoowgiis ayaa harqaanle ahaan jiray oo qasaare xoogan hadda ka hor kala kulmay ganacsigaan waxaana arinkan ka diidayo aabihiis inuu isagana harqaanle noqdo.
Mauji (Varun) taladii ay xaaskiisa Mamta usoo jeedisay marka kowaad wuu iska diidaa wuxuuna ka tagaa shaqadii uu heestay wuxuuna ku dhex wareegaa magaalada Delhi si uu shaqo kale u helo balse wuu weynaa waxaana kusii badanaayo culeeska Mauji (Varun) kadib markii hooyadiis xanuunsato oo isbitaal la dhigaayo loona sheegayo wadno xanuun ay qabto qaliin u baahan tahay reerkana waxba ma heestaan.
Ugu dambeyntii Mauji (Varun) oo xaaskiisa Mamta (Anushka) garab ka helaayo hal harqaan ayuu shaqo ku bilaabaa ilaa ay ka noqdaan qoys isku filan oo leh warshad dharka soo saarto oo loo suuq geeyo badeecadooda meelo ka baxsan dalka Hindiya.
Haddaba qaybaha dambe filimkan waxaa loo daawanayaa Mauji (Varun) iyo xaaskiisa Mamta (Anushka) sida ay isku kaashanayaan dhib iyo dheef ilaa ay ka noqdaan ganacsato hal abuurkoodii halka harqaan ama sharqaan ka bilaawday ilaa ay warshad weyn ka sameestaan oo dharka soo saarto.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Sui Dhaaga – Made In India: Director Sharat Katariya amaan gaar ah ayuu mudan yahay wuxuu doortay fariin sahlan oo waaqici ah wuxuuna u dhigay hab qof walbo uu fahmi karo ujeedka laga leeyahay kaliya fariintiisa malahan shactiro ama dhacdooyin ku mada daalianyo waana halka caqabad uu leeyahay filimkan marka lala bar bar dhigo filimkii fariinta arimaha bulshada ximbaarsanaa DUM LAGA KE HAISHA  ee uu isaga sameeyay kaasi oo mada daalo loo yeelay.
Amaan gaar ah ayuu mudan yahay Director Sharat Katariya madaama uu doortay fariin qalbiga taabaneyso si wacana uu sheekada u dhigay waana inuu u mahad celiyaa labada uu hogaaminta filimkan u doortay Varun Dhawan iyo Anushka Sharma inay 100% isku ekeysiiyeen doorarka loo dhiibay mana loo maleeyo jilaayaal caan ah balse dad caadi ah oo nolol waaqici ah matalaayo ayay iska dhigeen waana arin kale oo fariinta filimkan sii adkeesan maangal ahaan.
Bandhiga Jilaayaasha: Filimkan waa mid 100% fariin ahaan iyo muuqaal ahaan ku tiirsan Varun Dhawan iyo Anushka Sharma oo shaashada ka muujiyeen bandhigoodii ugu fiicnaa ebid waana cadaalad daro in dadaalkan ay bixiyeen lagu abaal marin waayo sanadka dambe bilawgiisa marka xafladaha abaal marinada lagu bixiyo la qaban doono.
Varun Dhawan door taariikhi ah ayuu sameeyay asigoo dhalinyar oo aan waaya arag ah inuu doorkan sameeyay waxay ka dhigan tahay xidigan inuu u diyaarsan yahay mustaqbalka dhow inuu Superstar weyn noqdo oo fariimo waaqici ah sameyn karo sidoo kalena wuxuu muujiyay awoodiisa qaab jiliin mada daalo kaliya inaysan ku xeen daabneyn sidoo kalena uu filimada fariimaha arimaha bulshada xambaarsan ee qaab jiliin wacan u baahan inuu ka baxsan karo.
Waa cajiib sida Anushka Sharma quruxdii iyo xarakaadkii lagu yaqiinay sida ay meel isaga dhigtay marwo tuulo ku nool oo seygeeda hormarkiisa jecel inay tahay ayaad ku daawan doontaa filimkan waxayna muujisay xidigtan waaya araga ah in door walbo doorkeeda yahay sidoo kalena atoore kasto atooraheeda yahay sheeko walbo oo loo dhiibana sheekadeeda tahay dhab ahaantii xifrada ay leedahay xidigtan Bollywood-ka siyaabo badan ayay kaga faa’iideesan karaan!
Dhamaan jilaayaasha kale ee filimkan fariinta waaqiciga ah xambaarsan si qurux badan ayay doorarkooda kaga soo baxeen bandhig ahaan filimkana micno ayay ugu jiraan.
Gunaanad: Sui Dhaaga – Made In India waa filim fariintiisa waaqici ah si wacan loo dhigay balse aan mada daalo lagu kabin sidoo kalena heeso wacan laheyn sidaa darteed dhalinyarada kama heli doonaan laakiin waa qasab inay qoysaska siweyn usoo dhaweeyaan sheekadan dhiiri galinta xambaarsan taasina waxay ka caawin doontaa mashruucaan inuu ganacsi wacan tiyaatarada ka sameeyo.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Sui Dhaaga – Made In India oo ah mashruuc qiiro badan: